"ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်က ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ အောင်ရေချမ်း" - Cele Gabar
“ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်က ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ အောင်ရေချမ်း”
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်အောင်ရေချမ်းကတော့ ပရိသတ်တွေမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ပဲ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာတာ (၁၀)နှစ်တိတိပြည့်မြောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကထဲကို ဖိုတိုမော်ဒယ်လ်တစ်ဦးအနေနဲ့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ အနုပညာသက်တမ်း (၁၀)နှစ်ပြည့်တဲ့ အကြောင်းကို “10 Years Anniversary. With my Job”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေက အောင်ရေချမ်းရယ်လို့ သတိထားမိတာ မကြာသေးပေမဲ့လည်း အောင်ရေချမ်းရဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ သက်တမ်းဟာတော့ (၁၀)နှစ်တိတိရှိပြီဆိုတာတော့ ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ အောင်ရေချမ်းရဲ့ လျှိုဝှက်ချက်တစ်ခုလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ အောင်ရေချမ်းက လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်က ဖိုတိုမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါသေးတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အောင်ရေချမ်းဟာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေဖြစ်တဲ့ “ပျားရည်အိုင်”၊”ကျွန်မက မဟေသီ” စတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားကာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ အောင်ရေချမ်းရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်ကပုံလေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
“ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ႏွစ္က ပံုေလးေတြကို ခ်ျပလိုက္တဲ့ ေအာင္ေရခ်မ္း”
ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေအာင္ေရခ်မ္းကေတာ့ ပရိသတ္ေတြမထင္မွတ္ထားေလာက္ေအာင္ပဲ အႏုပညာေလာကထဲကို ဝင္ေရာက္လာတာ (၁၀)ႏွစ္တိတိျပည့္ေျမာက္သြားၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။အႏုပညာေလာကထဲကို ဖိုတိုေမာ္ဒယ္လ္တစ္ဦးအေနနဲ႕ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ အႏုပညာသက္တမ္း (၁၀)ႏွစ္ျပည့္တဲ႕ အေၾကာင္းကို “10 Years Anniversary. With my Job”ဆိုၿပီး သူ႕ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ေဖာ္ျပထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြက ေအာင္ေရခ်မ္းရယ္လို႕ သတိထားမိတာ မၾကာေသးေပမဲ့လည္း ေအာင္ေရခ်မ္းရဲ႕ အႏုပညာေလာကထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ သက္တမ္းဟာေတာ့ (၁၀)ႏွစ္တိတိရွိၿပီဆိုတာေတာ့ ပရိသတ္ေတြမသိေသးတဲ့ ေအာင္ေရခ်မ္းရဲ႕ လွ်ိဳဝွက္ခ်က္တစ္ခုလို႕လည္း ဆိုရမွာပါ။ဒီေန႕မွာေတာ့ ေအာင္ေရခ်မ္းက လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ႏွစ္က ဖိုတိုေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ပံုေလးေတြကိုလည္း ခ်စ္ရတဲ့ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါေသးတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ ေအာင္ေရခ်မ္းဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ MRTV-4 ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြျဖစ္တဲ့ “ပ်ားရည္အိုင္”၊”ကၽြန္မက မေဟသီ” စတဲ႔႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားကာ ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေနတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ေအာင္ေရခ်မ္းရဲ႕ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀)ႏွစ္ကပံုေလးေတြကို ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
” နေခြည်ဦးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထင်မှားကာ ဝေဖန်သူတွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်း “
” မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည် ကိုကြွေနေပြီဖြစ်တဲ့ ရှိန်းတင့်ထူး “